Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoonadii Shacabka Itoobiya oo Inta Badan Wadanka Harqiyay.
Kacdoonadii Shacabka Itoobiya oo Inta Badan Wadanka Harqiyay.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay inta badan wadanka hadheeyeen dibad baxyo kala duwan oo dhamaantood lagu diidan yahay dhaqamada xun xun ee xukuumada wayaanaha.
Dibad baxa koobaad oo maalin nimadii shalay kadhacay magaalada Addis Ababa ayaa lagu soo dhawaynayay siyaasiyiinta qoomiyada Oromada udhashay ee taliska wayaanuhu uu xabsiga kasiidaayay, xubnahan xabsiga laga soodaayay oo katirsanaa ururka OFC ayaa dadwaynaha kula hadlay meel fagaare ah waxayna dadwaynaha iyo siyaasiyiintuba siwayn udhaleeceeyeen taliska wayaanaha.
Dhinaca kale dibad baxyo waawayn oo lagaga soo horjeedo xukuumada wayaanaha ayaa maanta kadhacay magaalooyinka Adama iyo Sabata, sidoo kale kacdoono shacab oo waawayn ayaa laga soo sheegayaa magaalooyinka Jima, Waliso, Balegoba, Nagale, iyo magaalooyin kale oo dhamaan tood katirsan Gobolka Oromia.
Kacdoonada shacabka ee lagu diidan yahay cadaalad darada kajirta wadanka Itoobiya ayaa hada umuuqda kuwo nolol maalmeed ka noqday guud ahaan wadanka, waxayna shacabku noqdeen kuwo ku faraxsan kacdoonada siisocda.
Dhinaca kale taliska wayaanaha iyo ciidamadiisa dhaqanka xun ayuu kudhacay wal wal aad ubadan, waxaana sii xoogaysanaya kala cararka iyo baxsadka saraakiisha iyo waliba askarta wayaanaha.
Kacdoonadan cusub ayaa daba socda codsigii dhalinta Oromada iyo Axmaarada ee ahaan in wadanka laga hirgaliyo kacdoono lagu quusinayo taliska wayaanaha.